Kuonekana kwechibvumirano chenyukireya neIran kuchabata sei misika yemasheya? | Ehupfumi Zvemari
Kuonekana kwechibvumirano chenyukireya neIran kuchabata sei misika yemasheya?
IEuropean misika yemasheya ari kuyedza kutora danho reUnited States kusiya chibvumirano chenyukireya neIran. Iko imwe yemhedzisiro yakatwasuka iyo danho rinopokana rakakonzera iri pachena mutengo wemafuta unodzokorodza. Nepo kukanganisa pamisika yemari kuri kungogumira, zvirinani kwenguva uye kusvika pakuona kuti chii chaicho chiitiko chinovhura mune ino nyowani mamiriro. Iko mainices indices eEuropean akasara pamatanho mamwechete emavhiki apfuura.
Ehe, paive nekutya pakati pevatengesi kuti kutengesa kwaizonyatso kukunda kukunda. Zvakanaka, zvine chekuita nesarudzo yakasarudzika yemusika weSpanish wemusika, iyo Ibex 35, hapana kumbove nekusiyana kwechero kuenderana kwemazuva ano. Kusvika pakuti iye akagona kutsungirira nhanho yakakosha yemapoinzi gumi nemazana maviri. Mune izvo zvinodudzirwa sechinhu chaitarisirwa nemisika yemari. Chero zvazvingaitika, njodzi huru iri muchokwadi chekuti nyaya yeIran yave chishuwo kumutungamiriri weUnited States, Donald Trump.
Mushure mekuita kubva kumabhegi akapusa, kusagadzikana kukuru kunoenderana nezvingaitwe nemabhegi mumasvondo mashoma anotevera. Ndipo apo panenge paine njodzi kune indices dzeanenge munhu wese kuwira mumutengo wavo. Zvichienderana nekutetereka uko chiitiko chenyika dzese chingatora. Hapana nyaya inogona kubviswa kunze kuti misika inogona kutakurwa ne kutengesa rwizi iyo inoderedza kukosha kwezvikamu zvakanyorwa pamisika yemari.
1 Oiri inotengesa pakakwirira
2 Nzira yekushandisa sei iyo rebound?
3 Mhedzisiro pamusika weSpanish wemusika
4 Argentina: nyowani yemari dambudziko
5 Matipi ekutengesa pamusika wekutengesa
Oiri inotengesa pakakwirira
Chimwe chinhu chakasiyana kwazvo ndizvo zviri kuitika nemutengo wegoridhe nhema sezvo zvatanga kukwira kumusoro izvo hazvizivikanwe zvechokwadi kuti zvinosvika kupi. Yekanguva yatodarika iyo yakakosha nhanho ye $ 75 dhiramu. Iyi ndiyo nhanho yemutengo iyo yanga isingaonekwe kwemakore mazhinji uye iri kupa zvikonzero zvitsva kune vashoma nevapakati varimari kuti vazvimise munzvimbo yemafuta mumwedzi iri kuuya. Hazvishamise kuti iyi midziyo yezvemari ine yakakosha kwazvo kumusoro uye inogona kubatsira kuita kuchengetedza kunobatsira zvakanyanya kupfuura mune zvimwe zvigadzirwa zvemari.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti iyo rebound iyo mafuta yakagadzira mumisika yemari iri dzinenge 4%. Kusvika padanho rekuti vaongorori vemusika vanofungidzira kuti danho iri nemutungamiriri wenyika yeUnited States rinozokonzeresa kudonha kwekutengesera kunze kwenyika muIran pakati pemabhirioni emamirioni ne200.000 pazuva pazuva zvichienzaniswa nekugadzirwa kwazvino. Hapana kushomeka kwemazwi anofungidzira kuti mutengo weiyi nhumbi yemari unogona kusvika padanho remadhora makumi mapfumbamwe munguva isina kureba zvakanyanya.
Nzira yekushandisa sei iyo rebound?
Imwe yezviito zvakatora mukana wakanakisa weichi chiitiko chitsva chinokanganisa zvigadzirwa mbichana ikambani yemafuta yenyika Repsol. Izvo hazvigone kuve zvishoma kana iri imwe yemakambani ari kubatsirwa zvakanyanya kubva pane izvi kuwedzera kukakavara kuMiddle East semhedzisiro yesarudzo yaDonald Trump. Uye zvakare, zvinofanirwa kuyeukwa kuti zvikamu zvavo zvaive zvichitove nerally yekusimudzira kwemakore akati wandei uye kuti vakatungamira mitengo yavo kumatanho e18 euros pamasheya. Chero nzira, ndeimwe yehunhu hwekufunga nezvayo kubva zvino zvichienda mberi.
Imwe nzira yakakosha yaunogona kutora kubva ikozvino zvichienda enda kuchinjana-chinotengeswa mari izvo zvinoenderana neichi chakakosha chemari pfuma. Kune akawanda ma ETFs anosangana neakasarudzika hunhu, kunyangwe hazvo iwe usinga tore kukwira kwemutengo we goridhe nhema neese kusimba. Mukudzoka, iwe unenge uine mukana unoyemurika wekuti iwe unenge wakachengetedzwa zvakanyanya kubva pazviitiko zvisingadiwe mumisika yemari. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti ETFs mubatanidzwa wemari yekudyara uye kutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya. Kunyangwe paine makwikwi emakomisheni kupfuura mune izvi zviviri zvigadzirwa zvemari.
Mhedzisiro pamusika weSpanish wemusika
Chimwe chinhu chakasiyana kwazvo chii chichaitika mumari kana iri toni yekusagadzikana ichengetwa mumisika yemafuta. Nekuti kana zvirizvo, pasina kupokana kuti yenyika stock stock ichatambura uye pamwe kunyange yakawanda kune iro rasara regore. Nedofo rinotaridzika mumakambani akanyorwa mumisika yenyika. Ehezve, mamiriro ezvinhu aunogona zvakakwana uye unofanirwa kufanoona kubva zvino zvichienda mberi. Kuunza nzira dzese dzekuchengetedza dze ipa chengetedzo kumari yako mune akaomesesa nguva kune chero investor chimiro. Kunyangwe iwo chaiwo mabhizinesi mikana achazotevera zvechokwadi.
Chero zvazvingaitika, zviitiko izvi zvinogona kushanda sekupembedza redirect your investfolio portfolio kutarisira kumakore mashoma anotevera. Mupfungwa iyi, uyu mumwe mukana unopihwa nemisika yezvemari kuti iwe ugone kuenderera nekuita mari inobatsira kubva ikozvino. Beyond mamwe akateedzana ezvehunyanzvi kufunga uye pamwe kunyange akakosha. Zvakadaro, kukwira kwegoridhe dema haisi nhau dzakanaka dzemisika yekutengesa. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinogona kuumba kusahadzika kwakanyanya kupfuura kusvika zvino. Kusvikira pakuti iwe unofanirwa kuve wakangwarira mune ako ekudyara. Nekuti maeuro mazhinji ari panjodzi.
Argentina: nyowani yemari dambudziko
Nekudaro, dambudziko rakaburitswa muArgentina rinogona kuve nemhedzisiro yakakomba pamusika wemasheya uye kunyanya kuSpanish. Kwete zvisina maturo, hurumende yeMacri yakakumbira kupindira kweInternational Monetary Fund (IMF), zvichipiwa dambudziko remari riri kusangana nenyika yeAmerica. Kubva pane ino mamiriro, isu tinofanirwa kuona kuvapo kwakasimba kwemakambani eSpanish akanyorwa pane Ibex 35 aripo muArgentina. Kuti ivo ndivo vangangobatwa zvakanyanya uye yeavo vanofanirwa kunge vasiri kushanda mumisika yemari. Zvimwe zvezvinyanya kukosha ndezvi BBVA, Santander kana Telefonica.
Zvinotarisirwa kuti musika wekuSpain wemusika ndeimwe yeanonyanya kusimukira kusimudzira kuramba kuchiderera nekuda kwemamiriro ezvinhu munyika ino yeSpain-America. Zvakanaka, mupfungwa iyi hapana imwe sarudzo kunze kwekungwarira uye kumirira kuti zviitiko zvinoshanduka sei mune imwe yemisika inokosha irikubuda munyika. Nekuti hunhu hweSpanish equities hunogona kuve hwakaipisisa kupfuura kune dzimwe nzvimbo dzehukosha hwakakosha mukondinendi yakare. Zvichatova zvinobatsira kusarudza kuvhura nzvimbo mu Eurostoxx 50 kukuvadza Ibex 35, Kuita kuti kuchengetedza kwedu kubatsire pamwe nezvakawanda zvivimbiso zvekubudirira.
Matipi ekutengesa pamusika wekutengesa
Wakatarisana neichi chiitiko chitsva chehupfumi hwenyika dzese, chimwe chezvinhu zvakanakisa chaungaite kubva ikozvino kuendesa nhevedzano yezviito marongero anogona kubatsira zvakanyanya kukudziridza chero zano rekudyara. Iko kuchengetedzeka kunofanirwa kukunda pamusoro pevamwe kufunga. Chinhu icho iyo purofiti iwe yaunogona kuwana kubva zvino zvichienda mberi yakanyanya kuderera kupfuura kusvika zvino. Kubva pane anotevera matipi.
Ino haisi nguva ye tanga mashandiro matsva mumusika wekuSpain wemusika. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinokurudzirwa zvikuru kumirira imwe nguva kuti uone kuti kukanganisa kwenyaya idzi dzinopisa dzanhasi chii.
Pane rutsva rwe mari yemari izvo zvinogona kubatsira zvakanyanya mumamiriro ezvinhu aripo anogara misika yemari. Imwe yadzo ioiri, asi kune zvimwe zvisingafungidzirwe izvo zvinoita kuti iwe ugadzire mari yakawanda.
Ino inguva yaunofanirwa kutora mukana kusiyanisa yako yazvino yekudyara portfolio. Icho chiitiko chekusanganisira nyowani yemari midziyo. Kutsiva vamwe kuti vanogona kutopa mari shoma kana kuti vangove vapera kushanda. Ndiwo mukana wekusiyanisa chero zano rekudyara.
Iwe haugone kukanganwa kuti mafambiro aya mumisika yemari iyo zvinogona kungova zvenguva pfupi. Kusvika padanho rekuti mamiriro acho anogona kudzokera kunzvimbo yemitambo mushure memavhiki mashoma kana mwedzi yekunetsana kuri pachena.
Iko hakuna kupokana kuti iwe unofanirwa kusarudza zvemari midziyo iyo yakanyudzwa mune zvakajeka bullish muitiro. Uye izvo nekudaro zvine kukosha kwakanyanya kwekudzokorora kupfuura mune zvimwe zviitiko. Zvirinani mukati yepakati nepakati, kunyangwe iwe uchifanira kumirira kwenguva yakareba kuti uwane mubairo waunoda.
Kubva pane ino mamiriro, iwe haufanire kuve anonyanya hasha mune ako ekudyara nzira. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti unogona kukusiira ma euro mazhinji mumisika yemari. Zviri nani panguva ino kudzokera kune mamwe maitiro ekuzvidzivirira, kunyangwe pakupedzisira zvido zvanyanya kushomeka. Iyi ndiyo hurukuro yechinyakare yesarudzo pakati pekuchengetedza kana purofiti uye uchafanirwa kusarudza imwe yeaya maviri mamodheru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Kuonekana kwechibvumirano chenyukireya neIran kuchabata sei misika yemasheya?
Chii chaunoziva nezve Fibonacci?